မယ်သီလရှင်လေးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မယ်သီလရှင်လေးတွေ
Posted by black chaw on Mar 15, 2012 in Photography, Travel | 35 comments
ကျွန်တော် မိသားစုနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးကို ဘုရားဖူးသွားပါတယ်။
အခု ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ မယ်သီလရှင်လေးတွေ ရဲ့ ပုံတွေ သီးသန့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ဘုရားဝတ်ပြုနေကြတဲ့ မယ်သီလရှင်တွေ။
ဦးဘလက်ကြီးရဲ့ ဓါတ်ပုံပညာ တိုးတက်လာပြီ …. သေချာနားမလည်လို့ မဝေဖန်တတ်ပေမယ့် ကောင်းတယ်လို့တော့ မြင်တယ် …
ပုံ ၁၃ ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ … အရွက်ဝါလေးတွေနဲ့ သီလရှင်တွေရဲ့ ပခုံးတင်သဘက်အရောင်က ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီး ရောသွားတာလေးက ကြည့်လို့လှတယ် …
ကျိုက်ထီးရိုးပုံတွေ တော်တော် များများရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
သည်းခံပြီး အားပေးဖို့ ပြင်ထားပေတော့ဗျာ။
ရှိသေးရင် ထပ်တင်ပေး.. ပုံတွေ ကာလာလည်း တော်တော် ကောင်းနေတယ်။
သတိရလိုက်တာ.. ဇန်န၀ါရီ လတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုးရောက်ခဲ့တာလေးတွေ အဟောင်းတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်သလို အေးနေတဲ့ စိတ်တွေ ပြန်နွေးသလို ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ခရီးသွားရတဲ့ အထဲမှာ ကျိုက်ထီးရိုးကိုတော့ သဘောကျတယ်။ တောင်လည်း တက်ရတယ် ဘုရားလည်း ဖူးရတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း တောထဲမှာ ဆိုတော့ သိပ်မပူလှဘူး။
အလှူခံတွေ ပက်စက်တာကလွဲရင် သိပ်သဘောကျတယ်။
ပုံ2လေးကြိုက်ပါတယ်…
သီလရှင်လေးတွေကို ဒီလိုလေးတွေ တွေချင်ပါတယ်…
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပုံတွေတော့ တင်ရမှာကို နှမြောနေလို့ ဥထားသေးတယ်။
တကယ်ကို ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ။ ကျိုက်ထီးရိုးကိုလဲ သတိရသွားတယ်။
ပုံ-13 ကို ကြိုက်ပါတယ်…။ ကျေးဇူးပါပဲ ကိုဘလက်ရေ…။
ဟုတ်တယ်…ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ … အခုလောက်ဆို ရွာသူတွေတောင် သီလရှင် ၀တ်ချင်စိတ်ပေါက်ပြီး သင်္ကြန်မှာ ၀တ်ကျမယ် ထင်ပါတယ်…။
ကောင်းမှကောင်း၊ ၂ နဲ့ ၆ အကြိုက်ဆုံး ။ ကျိုက်ထီးရိုးကိုလဲ မရောက်တာကြာလို့ သွားချင်နေတာ၊ ကိုချောပုံလေးတွေတွေ့တော့ သွားချင်စိတ်ကို ပိုတွန်းလာနေပြီ။ ကျန်ပုံလေးတွေ မြန်မြန်ပြပါတော့
အော် … လေးလေးဘလက်ကြီးက သီလရှင်လေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာကို ဝေဖန်ပေးစေချင်တာကို သိပါဘူး …. မီးမီးက သီလရှင်လေးတွေများဘာများအပြစ်ဖြစ်နေလဲလို့ အသေအချာကိုကြည့်နေတာ …. ကြိုးစားရိုက်ပေးထားတဲ့ လေးဘလက်လက်ရာကိုတော့ အားပေးလိုက်ပါတယ် ………နံပါတ်235အဲပုံလေး တွေကိုကြိုက်တယ် …….. သီလရှင်လေးတွေကိုတွေ့တော့ သီလရှင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်မဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို သတိရတယ် ……… နောက်မှအေးဆေးလေးဘလက်ကိုပြောပြဦးမယ် …………
အရင်တုန်းက image လေးတွေ ပြန်မြင်တတ်ဗျာ….
ရိုက်စရာ ရှားလို့ …သီလရှင်မှ ရိုက်ခဲ့သလား ဘဘဘလက်ရယ်….
ရွာသူရှောရှောလေးဒွေ လောကီ စိတ်ကုန်ပြီး သီလရှင်ဝတ်ကုန်လို့…
ကိုကြောင်တို့ နဘဂခ တို့ စိတ်ထိခယက် ကုန်ပါဦးမယ်…
ဦးချောကလက်ကြီးရေ … မွန်းကြပ်တဲ့ မြို့ပြကနေ ခွဲထွက်ပြီး …. ရိုက်လာတဲ့ … ပုံတွေတိုင်းကို သဘောကျပါတယ် … ။
ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး … မြင်မိတာလေးတွေ .. ပြောပါဦးမယ် … ။ဝေဖန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး … မြင်မိတာလေး …စိတ်ကူးရတာလေး ချရေးလိုက်တာပါ .. ဟီး ကိုယ်တိုင်သွားတုန်းကတော့ … ဘုရားဖူးချင်တာနဲ့.. ပျော်ချင်တဲ့ စိတ်ပဲရှိလို့ … သိပ်မတွေးတတ်ခဲ့ဘူး …. ။
၁ပုံကိုကြည့်ပြီး … ဘုရားဖူးဖို့ ပတ်လမ်းလုပ်ထားတာက … အတော်ကြီးအောက်ကို … ပြန်ချထားတာ .. ပတ်လမ်းကနေ အမျိုးသမီးတွေ ဘုရားကို ကိုင်ပြီးဖူးမှာ စိုးလို့လားမသိဘူးနော် … ။ ထင်တာလေးပါ … ဘေး တစ်ဘက် တစ်ချက်စီကတော့ ရင်ပြင်နဲ့ သိပ်မနိမ့်ပေမယ့် .. လှေခါးထစ်တွေလုပ်ပြီး … ဘုရားအောက်တည့်တည့်ရှိနေတဲ့နေရာကိုတော့… လူအရပ်လေးငါးပြန်မက ..ခွာထားတာလေး တွေးမိလို့ပါ … ။ အောက်ခံ တောင်ရဲ့ မြေသား အနိမ့်မြင်ပေါ် မူတည်လို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး ..။
၂ပုံ ထဲမှာ သာသနာ့အလံလေးကို တွေ့ပါတယ် … ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာလည်း မဟုတ် …. ပတ်လမ်းပေါ်မှာလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ် … အဝေးကနေကြည့်လျှင် သာသနာ့နယ်မြေအဖြစ်သိနိုင်စေဖို့ … signal လုပ်ထားတာလားလို့မြင်မိပါတယ် .. ။ (ဟုတ်မဟုတ်တော့သိဘူးနော် )
၃ပုံမှာတော့ … ဆီမီးခွက်လေးတွေမြင်ရပါတယ် … လပြည့်နေ့က ဘုရားပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. (ရမ်းရွှီးတာ) … ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ … (အလှူခံလို့ရထားတာလား ၊ အသင်းဖွဲ့ ပိုင်လား မသိတဲ့ .. ) တံမြက်စည်းတွေ … ဂေါ်ပြားတွေကို တာဝန်ကျသူတွေက … နေရာ စနစ်တကျ မထားကြတာပါပဲ … ။ သို့သော် .. သစ်ပင်တွေ ရှိပါလျှက် အရွက်မတွေ့ရတာတော့… သန့်ရှင်းရေးနိုင်နိုင်လုပ်ထားတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် … ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းမောသွားလို့ … တံမြတ်စည်းတွေ ပစ်ပြီး .. ခဏထိုင်နားနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် … ။
၄ပုံကတော့ … ဘလက်ဘောက်စ်လေးပဲ ပါတယ် … ပုံမပါဘူး … ။
၅ပုံမှာတော့… အမှိုက်ပုံးကြီးတောင် ပြည့်လျှံနေပါပကောလား … ။
၆ပုံမှာတော့ … အိတ်လေးတွေက ဆင်တူရယ် … ၊ အရွယ်လေးတွေက မတိမ်းမရိမ်းရယ်ဆိုတော့ .. နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် ကျောင်းတွေကနေ ..အဖွဲ့လိုက် သီလရှင်ဝတ်ကြတာလားလို့တောင် တွေးမိပါတယ် … ။ သို့သော်လည်း… ဂတုံးလေးတွေကိုကြည့်တော့.. အခုမှ ရိတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ပဲ .. လနဲ့ နှစ်နဲ့ချီအောင် သာသနာဘောင့်ထဲရောက်နေသူတွေလို့လည်း မြင်မိပါတယ် … ။ ဘယ်ဟာ မှန်သလဲဆိုတာတော့ … ဦးချောကလက်ကြီးပြောမှပဲ သိရတော့မယ် … ဟီး
၇ ပုံမှာကတော့ … လိမ်မ္မော်သီးကြီး တလုံးတွေ့တယ် .. သေချာကြည့်မှ ..မီးစလိုက်ကြီး ဖြစ်နေတယ် ဟီးဟီး .. ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ ..လေဒီတစ်ယောက်ကိုလည်း ..တွေ့ခဲ့ပါတယ် … ။ သူများတွေ အနွေးထည်ကိုယ်စီနဲ့ပေမယ့် .. သားအဖ (ဘာတော်လဲမသိ … ) တဲ့ နှစ်ယောက်ကတော့… ဘောင်းဘီတို အကျီ င်္တီရှပ်တွေနဲ့ … ဟီး ။
ပုံ၈ …. မှာတော့ … လက်ကိုင်ပုဝါလေး တစ်ထည်ကျနေပါတယ် … ဆရာလေးအုပ်စုထဲက .. ဖိနပ်ပိုင်ရှင်ဆရာလေးပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ … ။
ပုံ၉မှာတော့ ဆရာလေးတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ လူဂျီး … ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်ခံရပြီ .. ဟေးဟေး
ပုံ၁၀ .. ပူစော်တာတော့ ပူစော်တာပေါ့ … စည်းကမ်းရှိကြပါဗျို့ …. ။ စတီးတိုင်တွေ၊ တံတိုင်းခတ်ထားတာတွေကို .. မီးဟပ်မှာ စိုးလို့ … ဘောင်တွေပေါ် မီးမပူစော်ခိုင်းတာဖြစ်မယ် … ။
ပုံ၁၁ … အမေက ဘုရားရှိခိုးနေတုန်း .. ဟိုကလေး .. မီးသွားကိုင်မိလို့ကတော့ .. ပူတော့မှာပဲ … ။ မဆီမဆိုင် ဗေဒင်ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာ ကပ်ထားတဲ့ .. စာတန်းလေး သတိရမိတယ် .. သင်ဧ။်မျောက်ကဲ့သို့ ဆော့သော ကလေးများခေါ်မလာပါနဲ့တဲ့ .. ဟိဟိ …
ပုံ ၁၂ နဲ့ ၁၃ကိုကြည့်ပြီး ….. ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ် … တူညီဝတ်စုံ နဲ့ အရောင် ၊ သဏ္ဍန်ဆင်မြန်းထားမှုနဲ့(ပိတ်သားချင်း တူတူတောင် အရောင်ကွဲတာတွေ တွေ့ဖူးနေလို့ပါ… ဒီမှာက သဘက်လေးတွေကအစ တူတယ်လေ ..) … ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ …ညီညွတ်မှုတို့ ကိုလည်း မြင်ရပါတယ် …
ဒေါ်အိတုန်က စုံထောက် မျက်စေ့နဲ့ ကြည့်ပြီး အကုန်လုံးကိုဝေဖန်နေပါရောလား။
ပုံ ၇ …ကျောက်စောင်းလေးမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထဲ အဖော်မဲ့နေတယ်။
ရွာထဲက လူငယ်ခြေသွက်တွေ အမြန်သွားလိုက်ကြပါဦး။ ဦးရာသူရနိုင်တယ်နော်….
ပုံ ၈ ….သီလရှင်တွေ ၀ိုင်းထားတဲ့အလယ်မှာ လူတစ်ယောက် ငုတ်တုတ်လေး ဘာလုပ်နေပါလိမ့်။
အဲဒီ.. မိန်းမမတက်ရလို့.. လူလူချင်းကျား/မ.. ခွဲခြားနှိပ်ကွပ်ထားတဲ့.. ကျောက်တုံးကြီးနား.. ဂျပန်က.. ဂေးတယောက်တက်ပြီး.. ကျောက်တုံးတွန်းကြည့်တာကို.. ဂျပန်တီဗီမှာ ပြန်လွှင့်ဖူးပါတယ်..။
အဲဒါ.. အနားမှာစောင့်နေတဲ့.. စစ်သားတယောက်က.. ဂေးဂျပန်ကိုမိန်းမမှတ်ပြီး.. . မ၀င်ဖို့တားခံရတယ်..။
အဲဒီဂေးက.. ကျားဖြစ်ကြောင်း.. ပတ်စ်စပို့ပြပြီးမှ.. ကျောက်တုံးကို.. ၀င်လှုပ်ပြတာပါ..။
အောက်က.. နှိးပြားလေး.. ညွတ်ညွတ်သွားတာကိုပါ.. သေသေချာချာရိုက်ပြတယ်….
ကြာခဲ့ပြီ. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၁၅နှစ်လောက်ကလို့ထင်တယ်..။
ဧရာမရွှေရောင်ကျောက်တုံးကြီးဘေးအောက်မှာ.. ဦးညွှတ်နေတဲ့.. ပန်းရောင်ဝတ်.. ပျိုမြစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုကြည့်ရတာ.. စိတ်ထဲ..
အတွေးအမျိုးမျိုးဖြစ်မိတာမို့.. ဒီဓါတ်ပုံမျိုးက.. ဆုတောင်ရနိုင်တယ်တွေးမိပါရဲ့…။
သိသလို ..မသိသလိုပါဘဲ ….. ခစ်ခစ်…
နင်မသိရင် တိုးတိုးလေး ပြောပြမယ်
မြန်မာပြည်ရဲ့မြေ အကျယ် အ၀န်း နဲ့ စာရင် လူဦးရေ သန်း ၆၀ ဟာ
သိပ်နဲလွန်းတယ် ။ လူဦးရေ တိုးပွားအောင် လုပ်ရမယ် ။
အနာဂါတ်ရဲ့သားကောင်း မိခင်တွေ ပန်းရောင် ခြုံကုန်ကြတာ ကြည့်ရတော့
လောကကြီးဆိုတာ ဒုက္ခတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေဒါ…
ဘိရုမာတွေ …ဘုန်းဂျီးတွေ ၀တ်ကြဘာ ..မယ်သီလဒွေ ၀တ်ကြဘာ …
တရားအားထုတ်ကြဘာ.. လောကီက ထွက်ကြဘာ ….
လောကီကိစ္စဒွေကို အကုသိုလ် အလွန်အင်မတန်များတဲ့…
တီလုပ်ကြီးဒွေ ရိုဟင်ဂျာဂျီးဒွေ လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်….
သီလရှင်လေးတွေကိုပဲ ရှု့ထောင့်အမျိုးကနေ ရိုက်ပြထားတာ ကောင်းလိုက်တာ။
လွင်မိုးပြောတဲ့ ဒါ့ပုံရိုက်တာ အန်ကယ် (အန်ဂယ်လ် ကို နောက်ပြီး ပြောထားတာ) အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ။
အော် …ကျိုက်ထီးရိုးဆိုတာ တကယ့်ရာဇ၀င်ရှိတဲ့ နေရာပဲ
သီလရှင်လေးတွေကို ဒီလို ဘုရားရိပ်မှာ စည်းကမ်းရှိရှိနေကြပုံလေးတွေ တင်ပေးတာ ကျေးကျေးပါ။
နို့မို့ သီလရှင် ဆိုရင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ကားဂိတ်တွေမှာ အတင်းလိုက်တောင်းတဲ့ image ပဲ မြင်ယောင်တတ်ကြလို့။
သီလရှင်လေးတွေ ကြည့်ရတာ အတော်လေး ကျက်သရေရှိတယ်။
သူတို့က ကျောင်းပိတ်တုန်း ခဏအပျော်ဝတ်လား။ အပြီးဝတ်မှာလား။ ဘယ်ကလာတာလဲ။
မဗျူးခဲ့ဘူးလား ကဘချော။ ;-)
သစ်ကိုင်းတွေကြား က ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ က လူကြိုက်များမယ် ထင်ရဲ့။
ဘာလိုလိုနဲ့ကျိုက်ထီးရိုး မရောက်တာ ၁၆ နှစ်တောင် ကြာပေါ့။
ရွာသူတွေ လောကီစွန့်ချင်စိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုဘလက်ရေ….ဒီထက်များများတင်ပေးမှ ရမယ်။ ဒါ့ပုံတွေကို အန်ကယ်လ်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့။
သီလရှင်ဝတ်စုံမြင်တော့ ရွာသူဂေါင်ဇူးလေးကို သတိရတယ်ဗျာ…. ဂေါင်ဇူးလေးရေ ဦးကြောင်ကို ဘယ်သူနဲ့ယုံလို့ ပစ်ထားခဲ့တာလဲ…။။
ဘုရားမှာ လူတွေအများကြီးပဲနော်။ အတော် တိုးရလား ဦးဦးဘလက်။ ဒီလိုပုံလေးတွေမြင်တော့လည်း အေးချမ်းလိုက်တာနော်…. ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေကတော့ ဘယ်လိုရိုက်ရိုက် ရှုခင်းကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။
မနေနိုင်လို့ ဈေးဝင်ဖြတ်မိပြီ ။
သဂျီး က ခင်ဗျာ့ပုံတွေ ကို ကြွေနေပြီ ။
တစ်ပုံ ကို ၁၅၀၀ အစိမ်း မရရင် လုံးဝ မထုတ်ပါနဲ့ နော် ။
ကျောက်ပွဲစား မောင်ပေ နေပူတော် ကျောက်လေလံက ပြန်လာပြီး သူများရဲ့ အနုပညာကို သူ့ရဲ့ ကျောက်ဈေးနဲ့ယှဉ်ကြည့်နေတယ်ထင်တယ်။
၀ါသနာရှင်ခြင်း အားပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ။
ညနေပိုင်း ရေမိုးချိုးပြီး ဘုရားဖူးဘို့ထွက်အလာ သူတို့ ဘုရားဝတ်ပြုနေတာ
အခုတစ်ခေါက် ကျွန်တော်သွားခဲ့တာတော့ အလှူခံ သိတ်မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျ။
တစ်ခုပဲ။ လမ်းကြေးက ရန်ကုန်ကနေ ကျိုက်ထီးရိုးအထိ ၃၉၀၀ လောက်ပေးရပါတယ်။
လမ်းကတော့ နိုင်လွန်ကတ္တရာထဲမှာ ဒီလောက်ကောင်းတာ တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။
@ Uncle Lay ;
ကိုသော့ရေ။ ဆရာ လုပ်တဲ့သူက ချီးကျူးတော့
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ခိုင်ခိုင်ရေ။
သီလရှင်ကျောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အလှူလေးအကြောင်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ဗျာ။
ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့အားထုတ်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးက
ကျွန်တော့်ကို အမောပြေစေပါတယ် ကိုပါလေရာရေ။
ဒီတစ်ခါကြုံမှ လဖက်ရည်ချိုပေါ့ကျလေး တိုက်ဦးမယ် ဗျာ။
@ chel gyi ;
@ inz@ghi ;
သီလရှင်လေးတွေကို ရိုက်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။
ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှ သူတို့က ဘုရားဝတ်ပြုနေချိန်နဲ့
ဒါပေမယ့် မျက်နှာတွေ ပေါ်နေတော့ တင်လို့ မသင့်တော်ဘူးလေ။ အဲဒါ။
သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်ပြီး ရေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးမို့
အမှန် အမျိုးသမီးတွေလည်း ရွှေပြားကပ်လို့ ရသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သူကြီးရဲ့ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
@ man power ;
ချီးကျူးသွားတဲ့အတွက် မနေတတ်မထိုင်တတ်တောင် ဖြစ်သွားပါတယ် မမရေ။
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ဆရာထက်ရေ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ လှတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရေ။
ထင်တာတော့ ကျောင်းပိတ်တုန်း ခဏ၀တ်ကြတဲ့ အဖွဲ့တွေလို့ထင်ပါတယ်။
ပုံတွေကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ တိုက်ဆိုင်မှုပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
@ nigimi 77 ;
အော် ၁၆ နှစ်တောင် ရှိပြီ ဆိုရင် ၁၇ နှစ်မဖြစ်ရအောင်
ဒီတစ်ခါသွားရင် လိုက်ခဲ့ဗျာ။ ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရမလဲ ပြောထားပါ။
အော် ကြောင်ကြီးကောင်မလေးကလည်း သီလရှင်ဝတ်သွားတာပဲလား။
မထူးဘူးဗျာ။ ကြောင်ကြီးလည်း ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်။
ဓါတ်ပုံပညာရှင် လုံးဝ မဟုတ်တာသေချာပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုင်တဲ့ ကင်မရာကလည်း အပျော်တမ်းကင်မရာလေးပါ။
ပုံကောင်းလေးတွေထွက်တယ်ဆိုရင် တိုက်ဆိုင်သွားလို့ ဖြစ်မှာပါ။
အသာလုပ်ပါ။ အဲဒီလောက်အဆင့်လည်း မဟုတ်တာ သိနေလျက်နဲ့။
တော်ကြာသူကြီး သောက်မြင်ကတ်ပြီး ဓါတ်ပုံတွေ မတင်ရလုပ်နေမှ